Mayelana NATHI | I-Hangzhou Huanyu Textile Co., Ltd
I-Hangzhou Huanyu Textile Co., Ltd
Gxila ekwenziweni kwendwangu
Ukujula kumkhiqizo wendwangu esezingeni eliphakeme nasochungechungeni lwendwangu ethembekile
I-Hangzhou Huanyu Textile Co., Ltd uneminyaka engaphezu kwengu-20 ngokuqhubekayo nesipiliyoni embonini yendwangu. Siqala kusuka kufemu encane yokudaya ekuqaleni ngabasebenzi abayi-15. Ngemuva kweminyaka engaphezu kwengu-20 yentuthuko eqhubekayo kanye emisha, manje sesinayo imboni yethu ukudaya futhi eqeda ifektri nabasebenzi abangaphezu kuka-200. Futhi amandla we-prodcution wendwangu akhuphukele kumamitha ayi-200,000 ngosuku.
Ukuthengiswa kwethu kusiza amakhasimende asekhaya kanye nabathengi bamazwe aphesheya. Yamukela bonke abathengi abasinikeza imibuzo. Futhi Wemukela bonke abathengi behla futhi bavakashele inkampani yethu.
Sinikezela ngentambo ethembekile futhi esheshayo yokuhlinzeka ngendwangu kubathengi bamazwe aphesheya. Izinhlobo eziyinhloko zendwangu esiyenzayo ziyindwangu ye-polyester taffeta, indwangu ye-polyester pongee, indwangu ye-polyester twill lining, indwangu ye-polyester oxford, indwangu ye-polyester taslon njalonjalo. Indwangu yokuqedela esingayinikeza kufaka phakathi i-cire, i-PA / PU / iSiliva enamathela, i-PVC calendering kanye ne-lamination.
Ikhadi Lokufanisa Umbala
Sinikeza abathengi bethu amakhadi afanayo ombala kubathengi bethu ukuze bakhethe imibala yabo kalula. Siphinde sibe nelabhorethri yethu yokucwilisa amalebhu, sinikeze insizakalo yediphu yalabo abasithumela amasampula noma amakhodi we-pantone.